မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: စုကြဦးမယ်..တပျော်တပါး
ကျွန်တော်လည်း ဆရာ့ရဲ့ ရှေးဦးမဆွ မူလလက်ဟောင်း သားတပည့်ရင်း တစ်ယောက်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာ့ကို ကျွန်တော့်ရဲ့ဝက်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်မှုတွေအကြောင်း ပြောပြ၊ အခက်အခဲတွေကို တင်ပြရင်း အခွင့်ရရင် ဆရာ့ဆီက ပိုက်ဆံပါချေးချင်ပါတယ်။
Happy hours in Singapore? good
confused! did you say you going2nights holiday this weekend with your friend? plan changed?
မမီးရေ ဆရာကိုတွေ့ချင်ပါတယ်။ ဆရာဒီကိုရောက်ရင် sms လေးပို့ပေးပါလား။ လာတွေ့ချင်ပါတယ်။